wakhtiga caadada - Galmada.net
Waqtigaas caada wareerka la soo gudboonato ayaa dumarka qeebtood waxey is weeydiyaan su’aalo ey ka mid yihiin: Maxa caadada iga soo dahday? Maxan laba goor caado u heley bil gudaheed? caadeydu maxey u istaagi la’dahey? iyo goormey istaagi?
Su’aalahaas iyo kuwo la mid ah oo dumar badan ka nixisa, oo jahwareer iyo shaki ku rida hadeysan aqoon u laheyn.
Waa ku kala duwanyihin dumarka intey le’egtahey dhiiga ka imaada waqtiga caadada ey ku jiraan. Sida caadiga ah ayaa dumarka qeebtood helaan dhiig qiyaasti dhan 12 qaando, kuwana waxa laga yaaba 3 qaando ama ka yar bishii iney ka dhacdo.